XOG: AC Milan oo PSG kula heshiisey raace-dhisaha Grzegorz Krychowiak – Gool FM
XOG: AC Milan oo PSG kula heshiisey raace-dhisaha Grzegorz Krychowiak
(Milano) 13 Juunyo 2017 – Waxay mar u muuqatay arrin dhamaatay oo lagu heshiiyay kaddib markii ay soo baxday inay AC Milan 50 milyan oo euro ku wada qaadanayso Lucas Biglia iyo Balde Salif Diao Keita, balse laacibka dambe ayaa door bidaya Juventus isagoo doonaya inuu dheelo CL.
Sida darteed Milan baa ka caga jiidaysa inay 25 milyan oo euro kaligii ku bixiso Biglia oo 31 jir ah qandaraaskiisuna dhacayo sanad kaddib sida uu sheegay Paolo Bargiggia oo u warrama Sportmediaset, oo sheegaya inaysan Milan dhaafaynin 15-18 milyan oo euro.
XAL KALE – Shalaytoole waxaa Cassa Milan ku shiray maareeyaha ciyaaraha Milan ee Massimiliano Mirabelli iyo dhiggiisa Paris Saint-Germain ee Antero Henrique, waxayna kooxda Via Aldo Rossi la meel dhigtay inay qaab amaah kusoo qaataan Grzegorz Krychowiak kaasoo ay ku xiran tahay shuruud ah in la iibsan karo.
Kooxda Rossoneri ayaase maalmo yar u cag dhigaysa arrinta Biglia, waloow ay marleeyba qaadanayso Polish-kan, iyadoo uu Marco Fassone maanta Roma uga qayb gelayo shirka kooxaha Yurub ee ECA, lagana yaabo inuu isku daygii ugu dambeeyay ka sameeyo arrinta Biglia-Keita.
Dhanka kale, Grzegorz Krychowiak oo Poland u dhashay ayay taageerayaasa AC Milan u arkaan dookh kaba habboon Biglia, waayo waa mare waa 27-jir ka da’ yar Biglia, mar waa laacib adag oo difaacista iyo weerar dhisidda kubaddaba ku wanaagsan, marka kale miisaaniyadda Milan waxba u dhimi maayo maaddaama uu ku imanayo qaab amaah oo ay Milan sanadka dambe iibsan karto, waxaa intaa dheer inuu kasoo ciyaaray horyaallo waawayn sida La Lila isagoo waaya aragnimo sarreeysa u leh koobka EL oo uu qaad qaadan jirey waagiisii Sevilla.
Milan ayaa haatan diiradda saaraysa khadka dhexe iyadoo kaddib u wada weecan doonta daafaca dadabka midig ee Andrea Conti oo lagu wado in arrintiisa lasoo afmeero todobaadka soo aaddan.
Meydka allaha u naxariistee Cheick Tiote oo loo soo qaaday Dalkiisa...( Papiss Cisse oo aad u ilmeeyay)...+SAWIRRO
GOOGOOSKA: Singapore vs Argentina 0-6 (Argies oo lix la dhacey Singapore)